Waa maxay Androids Games Room?
Style qol kulan Androids waa app bixi gaar ah oo loogu abuuro naqshado xiiso leh oo xiiso leh qolal online. Sidoo kale, waxaa ka mid ah qaybaha kulan video on boosteejo Android in maraan gameplays in uu leeyahay qolal sida mawduucyada ay. In noocan ah kulan aad ka heli doontaa ugu rarataan culaysyo kulan xiiso, dahsoon, iyo xiiso leh sida aad marna ka hor arki. Haddii aad xiisaynayso in ciyaaro iyo malaha Garan maayo meel aan ka bilowno, kuwaas liisaska Android qol kulan oo kaa caawin doona.
Planner 1. Roomstyler 3D
Halkan waa fursad lagu siiyo Grandmaster qolka naqshado 3D macquul ah si aad u hesho lacag la'aan ah. Roomstyler kala duwan ugu weyn ee 3D ka magac heer sarre ah. Noocyada waxaa laga heli karaa si aad isugu daydo oo aad gacmihiinna oo naqshadiisa qolalka aad online ka hor inta dhab ah samaynta. Isku day inaad ka soo ka badan 120,000 oo waxyaabaha live heli karaa 3D; waxa kale oo aad fursad ay ku xirmaan bulshada ku haboon ka kooban Addomahaaga design, khubaro, iyo ardaydu helaan. Sidaas, dhaqso u dari Guryihiinna in ka badan 850,000 oo guryaha loogu talagalay isticmaalaya codsigan.
2. Room ayaa 2
Platform: Androids 2.3 oo lagu daray
Tani waa ciyaar xujo xiiso in ay awood u duubaya ciyaartoyda ay dunida aan la garanayn galay saacado badan. Nasiib darro, Laba Room ma laha muuqaalada ku celiska ah. Waxaa si fiican u la shidin tagaa oo sidaas daraaddeed waxay noqon kartaa bixi karo meel kasta oo shiddaa, waxaa la bixiyaa. Waxaa la iman faa'iidooyin kala duwan oo ay si naxariis darro ah oo adag oo loogu talagalay dadka jecel tartanka yihiin; Intaa waxaa dheer, waxa uu raad dhawaaqa cabsi, waa wax la qabatimo, oo ay fududahay in la isku dubaridi.
3. Room ayaa
Qolka waa puzzlers jirka oo la enfolded kulan qarsan. Waxaa loo qorsheeyay gudaha adduunka aad u il-qabad 3D. Qolka waa sida god halkaas oo waxyaabaha badan oo dahsoon waxaa la helay oo dhan carruurnimada ciyaartoyda. Waxaa sidoo kale lagu soo rogi karaa sida encapsulation ku haboon raaxaysi iyo cabsi daahfurka. Ciyaarta waa dabka oo ku faanayaa in uu soo bandhigo ka mid ah Abuuridda adduunka weheliso safar waali ah mid sarreysa by qurux, wax qarsoon, oo halis. Ku biir ee ciyaarta iyo in loo qaado meel cajiib ah oo gaar ah oo Galiyo muuqaallada mesmerizing iyo dhib xiiso si ay u xaliyaan.
Platform: Android 4.0 oo lagu daray
Ayaa qolka ciyaarta classic waa codsi ah oo bixiya macluumaad macaamiishu wixii dib u eegid ugu hadda la heli karo ee Game Classic ah Room. Waxaa hubinayaa goobood oo kala duwan qolka maalmeedkaaga ratings. Marka rating ah waxaa bixiya user ah u soo diri doonaa macluumaad heegan bixinta ah oo ku saabsan dib u eegista cusub. Xaaladdan ogeysiis ah uga maqnaan waxa ay sabab kasta, users kormeeri kartaa koob oo ka mid ah ratings ugu hadda gudaha barnaamijyadooda ka. Intaa waxaa dheer, waxa ay ka mid ka caawisaa si ay u doortaan channel aad u haboon Times oo sidoo kale awood u isticmaala in ay ogaadaan sida ay u rabto ururiyaan qaylodhaan.
5. baxso Room ah: Limited Time
Platform: Androids 2.1 ilaa
Hel diyaar u ah inay ka baxsadaan Room The: raaxaysan kulan aan xad lahayn u cararaan baaris. Waxay leedahay storyline ah mashquuliya Timid ay brand ee qallooca lama filaan ah. Ma waxaad tahay dunida ka baxsado hawgal ah, waxaad markaas ma doonayaan inay seegaan fursad weyn oo ku raaxaysan waxa aad dareen ku saabsan si buuxda. Kulankaan waa Kulamadan caadiga ah ay ku jiraan oo dhan razzmatazz ficilka saacad iyo seef. Players Ayaa la filayaa in ay bixiyaan xal 50 nooc oo kulan ay ku jiraan kuwa ku Maqan. Weligaa ma kuwaad waxa dhici doona haddii aad aragto naftaada qol iyo xaq gudaha kula Waa markii bam lagu gujinaya iska iyo u diyaargarowga in qarxi? Hadii aad waligaa doonayay in lagu cabiro heerka aad dareen badbaadada, sababta aan kala soo bixi kulankaan.
6. Albaabada Room cararidda Game
Platform: Androids 2.2 oo lagu daray
Ujeedada kulankan waa in ay ka baxsadaan ka mid ah qolalka iyo jawaabo siiyaan in waxa Agtooda ah in lagu furo albaabka iyo dillaaco ee qolka. Waxaa qoreysa kulan yar yar kuwaas oo ku haboon in la burburiyo wakhtiga aad firaaqada.
7. oo maqan
Tani waa ciyaar aad u xiiso badan in la ciyaari karo madal ay Android. Inkastoo, sanamyadii qorraxda ee kulankaan waa fudud quruxsan; si kastaba ha ahaatee ay jiraan wax ku saabsan ciyaarta in aad barbaro oo ay qabsadaan inaad fiiro muddo dheer. Fikradda cayaarta waxa ay tahay in ciyaartoyda dabin qol; halka ku xayiran ay sahamin karaan deegaanka qolka la isticmaalayo ay farta ku dhowaad ka jaftaa. In geeddi-socodka baaraya deegaanka, waxyaabaha kala duwan oo gargaarayn ay ka baxsiga qol ah in la helay karaa.
8. Dilkii Room
Platform: Androids 2.3.3 ilaa
Tani waa ciyaar maskaxeed naxdin ku lug leh dilaaga caadaystay barnaamijkii ee ciyaarta inay ugaadhsadaan ciyaaryahanka. Waligaa ugaarsanaya dilaaga ah taxanaha? Haddii aad ka jawaabi jirin, ka dibna ku saabsan in la ogaado waxa uu dareensan yahay in sida aad tahay. Si aad u ciyaaro kulankaan waa inaad haysataa madaale ah si ay u noolaadaan, ka hor imaanaya u qalmay oo dhan, oo u tartami ilaa Cadawgiinna ka adkaan dareen badbaado.
9. 100 Albaabada iyo qolalka baxso
Platform: Android 2.3 ilaa
Tani waxaa ay albaabada ugu hadda wareeriya ama Game qarsoon soo saara "100 albaabada Albaabo iyo ogaato." Si aad u ciyaarin ciyaarta oo aad qabto in la ogaado jawaabta ee ciyaarta iyo xal u badan yaabay iyo xujooyinkooda inay ka baxsadaan qolalka badan. Haddii aad u jecel yihiin caqabadaha iyo jeceshahay in aad bixiso maskaxda tababarka wanaagsan, kala soo bixi kulankaan hadda, waa lacag la'aan.
10. Inuu Iibsado (xujo A qolalka)
Kulankan ciyaaryahan ayaa la filayaa inay wareeriya ay uga gudbaan qolal kala duwan oo toos ah Anne ka xiiso leh in la ogaado qarsoodiga wadnaha ee guri nagaadi ah ay leeyihiin toymaker ah. Waxaa jira waa sixir in guri nagaadi ah oo ay leedahay in ay ka shaqeeyaan iyada baxsado.
Liiska Android qol kulan oo runtii yahay mid aad u badan. Qolka kulan lagu taliyey ee ku qoran oo ka wada hadlay si kooban in this article yihiin qaar ka mid ah maanta ugu wanaagsan ee la heli karo. Qolka ciyaaraha waa ciyaar aad u xiiso badan oo loogu talagalay dadka jecel saacad iyo seeftii kala nooc ah kulan. Sidaas, akhriyaan oo dhan soo xulay, oo kala soo bixi kuwa xanxanto aad malana - riyaaqaa inaan u ciyaaro kulamada.
> Resource > Game > Top talinayo Android Games Room